Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Usuku loKhenketho lweHlabathi kunye noGoogle
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
UGoogle urekhodisha umkhondo weyona ndawo iphambili yabakhenkethi ekhangelwe kwiiMephu zikaGoogle e-Itali naseYurophu. Kumsitho woSuku lwezoKhenketho lweHlabathi, olubhiyozelwa namhlanje, nge-27 kaSeptemba, 2021, injini yokukhangela iqokelele inqanaba lokufika kwe-Italiya neYurophu kwaye yenza ukuphinda izixhobo kunye namanyathelo amiselweyo ukuxhasa ishishini lokhenketho.
Ukulandelela kwaqala ukusukela ekuqaleni konyaka kwezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi e-Itali kwiiMephu zikaGoogle.
Ezona zaziwa kakhulu zezi: iColosseum, i-Amalfi Coast, iMilan Cathedral, iGardaland, iTrevi Fountain, iNqaba yePisa, iPantheon, iPiazza Navona, iPiazza del Popolo, kunye neVilla Borghese.
Ngokuphathelele kuyo yonke iYurophu, iindawo ezilishumi ezifunwa kakhulu emva kokubandakanya zibandakanya ezi-3 e-Itali.
Ukwenza ezilishumi eziphezulu eYurophu zezi: iTyelelo i-Eiffel (eFrance), iBasílica de la Sagrada Família (eSpain), iMusée du Louvre (eFrance), i-Europa-Park (eJamani), iColosseum (ElamaTaliyane), Plitvička jezera (Croatia), Amalfi Coast (Italy), Energylandia (Poland), Milan Duomo Cathedral (Italy), Camp Nou (Spain).
Kunyaka ophelileyo, uGoogle usebenze nomzi mveliso wezokhenketho ngokunika ulwazi, izixhobo ezingabizi mali, kunye noqeqesho lokuphumeza izakhono zedijithali zokuxhasa amashishini kunye namaziko okhenketho ukulungiselela nokuzilungelelanisa nesiqhelo esitsha.
Kule mihla, injini yokukhangela ikwasungule iseti yezixhobo kunye namanyathelo okunceda amashishini ezokhenketho amkele kwaye aqhagamshele nabantu kwi-Intanethi.
Oku kubandakanya izinto ezintsha ze Usesho lweGoogle ukunceda abantu bafumane izinto ezinomtsalane, ukhenketho, okanye ezinye izinto. Xa abantu bekhangela izinto ezinomtsalane, ezinjenge-Eiffel Tower, imodyuli entsha iya kubonisa amakhonkco okubhukisha amatikiti okwamkelwa kunye nezinye iindlela apho zikhona. Le nkonzo iyafumaneka ngesiNgesi kwihlabathi liphela, kwaye amaqabane anokukhuthaza ukubhukisha amatikiti ngaphandle kweendleko, ngokufana nokunxibelelana simahla kwihotele ukubhukisha okwaziswe ekuqaleni kwalo nyaka.
Esinye isixhobo sesokuba sinxulumene nolwazi lokuzibophelela kweehotele ngokubhekisele kuzinzo ngqo kugoogle.com/travel. Ngapha koko, iindlela zophando zibonisa ukwanda kophando lweendlela ezizinzileyo zokuhamba, njengoko kungqinwa kukukhangela "ihotele ye-eco," ebisoloko ikhula rhoqo ukusukela ngo-2004.
Ukusukela kule nyanga, ukukhangelwa kwezakhiwo zehotele kukhatshwa licandelo leenkcukacha kunye noluhlu lwamanyathelo athathwe yihotele ukulungiselela ukuzinza kunye nelebheli "eqinisekisiweyo ye-eco" ecaleni kwegama lolwakhiwo.
Okokugqibela, uGoogle ujoyina umanyano lweTravalyst njengelungu elisekayo ukunceda ukuphuhlisa imodeli esehlabathini evulekileyo yokubala kunye nokujonga ukukhutshwa kwekhabhoni yomoya kunye nokunceda ekuphuhliseni imigangatho efanayo yeehotele. Umbutho okhokelwa yiNkosana uHarry, uDuke waseSussex, kwaye wasekwa ngokubambisana neBooker.com, iSkyscanner, iTrip.com, kunye neVisa - ayisiyo ngeniso kwaye isebenza ukunceda ukwenza utshintsho ukuze uhambo oluzinzileyo lube yinto eqhelekileyo kwaye lungasekho. niche kuphela.